Amaxwebhu ayiliweyo oyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | Idizayini yeMifanekiso
URachael Ashe kwinkomfa yakhe «Ukwenza ngesandla»
Los amaxwebhu malunga noyilo ziyindlela elungileyo yokufunda iikhonsepthi ezintsha, jonga ezinye iimbono ngesihloko, okanye ubonakalise igalelo kwezinye iingcali ezaziwayo. Zifundisa kakhulu, kwaye ukhetho olufanelekileyo ukubona ezo mvula zingena mvula apho isicwangciso osifunayo kuphela esaziwa ngokuba "yingubo kunye nesofa."
Ukusuka apha ndiyakukhuthaza ukuba ume, endaweni yokubukela eso sahluko usalindileyo kuthotho lwakho oluthandayo (okanye imovie yomzuzu), yenza umngxunya amaxwebhu anomdla malunga noyilo endinilungiselele lona nonke. Ukuba ufuna esinye isithuba esifana nesi, esinamaxwebhu amaninzi kunye neentetho, unganqikazi ukuyicela kumagqabaza.
Amaxwebhu ayiliweyo (kunye neeNtetho)
IHelvetica: luxwebhu olubhaliweyo, ukugqwesa. Umntu kufuneka abone nawuphi na umyili, njengoko eyifilimu ezimeleyo malunga typography, ukuyila y inkcubeko ebonakalayo. Igalelo elinomdla kakhulu kumaxwebhu ayiliweyo ngabaqambi abaziwayo. Yintoni esele ithethiwe: kubalulekile ukuyibona.
Injongo: uxwebhu malunga uyilo lweshishini. Ivavanya izinto kunye nenkqubo yoyilo yomyili: ukusuka kwibhrashi yamazinyo ukuya kwizixhobo ezinobunkunkqele.
Aba bafana bangaphandle baseBarcelonaIdalwe kwiminyaka emibini edlulileyo njengeprojeki yokugqibela, olu xwebhu lujongana nemeko yangoku ye uyilo eBarcelona. Kuyo, iingcali zoyilo ezininzi zisinika izimvo zazo malunga nokuvela kwecandelo kwesi sixeko kwaye banethemba lokuba kuya kwenzeka kwikamva.
UStefan Sagmeister: UStefan Sagmeister noJessica Walsh bathetha kolu xwebhu malunga nomsebenzi wabo kunye nabo inkqubo yokudala. Nangona ikwisiNgesi, kufanelekile ukwenza inzame zokuyibona.
Ukwenza ngesandla: URachael Ashe uthetha ngokubaluleka kokwenza izinto nge ezakho izandla nephepha. Umsebenzi wakhe kwiminyaka yakutshanje ugxile ekudalweni kwemifanekiso eqingqiweyo enephepha njengezinto. Kwakhona ngesiNgesi.
Yintoni uyilo lwegraphic?Umbhalo waseArgentina apho oonjingalwazi, iingcali kunye neengcali bazama ukuchaza "uyilo lwegraphic". Imibuzo enomdla ivela kwaye yincwadi ebhaliweyo eya kuthi isenze sibonise.
I-Virtual Revolution "Ixabiso lasimahla"amaxwebhu anomdla asixelela ngokuchanekileyo malunga isimahla kwi-intanethi. Ngaba simahla ngokwenene? Ngaba akukho ndleko kumsebenzisi? Mhlawumbi hayi uqoqosho, kodwa ubukrelekrele: ukubuyisela ii-webs zifumana iminqweno yethu, iingcinga ... Yibone.
Abathinteli: I-documentary emfutshane ephanda ukuba yintoni umntu onempembelelo kwaye njani Iindlela zokuyila, ifashoni okanye umculo, bayosulela.
Akukho logoUxwebhu lukaNaomi Klein, olusekwe kumthengisi wegama elifanayo, othetha nge ifuthe lophawu kwinkcubeko nakuluntu.
Imfundo engavumelekanga: ifilimu ebhaliweyo ecebisa ukubuyisa izindululo kunye nezenzo ezijongana nemfundo kwi imbono eyahlukileyo, Yenza kubonakale la mava abenobuganga bokutshintsha izakhiwo zemodeli yesikolo semveli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyile amaxwebhu ekufuneka uwabonile
IArmando Filos sitsho
Amagqabantshintshi enu anomdla kakhulu. Yiyo loo nto uvumela enye ukuba iqhubeke nokukhula ngakumbi umntu wam. Enkosi. Ah, qhubeka undithumela okanye ndibeka ngaphezulu amaxwebhu okanye amaxwebhu e-PDF ukuze ndifunde kwaye ndiqhubeke, ngaloo ndlela ndiphucula ulwazi lwam ...
Phendula u-Armando Filos
Lua louro sitsho
Enkosi ngengcaciso yakho Armando. Ndiza kuqhubeka nokwenza olunye uluhlu lweentetho kunye neenkomfa ezinomdla kubayili :)
Phendula uLúa Louro